त्यागौं जातिय विभेद - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	त्यागौं जातिय विभेद
by Tanahu Awaj 19th March 2020 19th March 2020
19th March 2020 19th March 2020 154 views
हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मार्च २१ मा संसारभर संगै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने गरिन्छ । संसारका विभिन्न देश, राज्य, समाज र समुदायमा रहेको जातिय विभेदरुपि २१ औं शताबदीको कलंकलाई नामेट गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो । अझ भनौं संसारमा कुनै न कुनै रुपमा रहेको जातिय विभेदलाई अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पुगोस भनेर यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।
विकसित भनिएको पश्चिमा समाज होस् वा प्राचिन सभ्यताको उद्गम थलो भनिएको हाम्रो पूर्विय समाज जताततै जातिय विभेद कायमै छ । पश्चिममा काला र गोरा जातिकाबीचमा विभेद छ भने हामी कहाँ कामका आधारमा बनको जात व्यवस्था अन्ततः विभेदको कारक बन्दै समाजमा गहिरोसंग जरा गाडेर बसेको
छ । पश्चिमा समाजमा गोरा जातिले काला जातिलाई गर्ने विभेद विकसित भनिने उक्त समाजका लागि नसुहाउँदो कुरा हो र हामी कहाँ भएको जातका आधारमा गरिने विभेद पनि अत्यन्त नसुहाउने कुरा हो । जो जहाँसुकै र जो कसैको कोखमा जन्मेको किन नहोस्, सबैको नशामा बग्ने रगत रातो नै
हुन्छ । सबैको मन आफुलाई कसैले विभेद गर्दा दुख्छ, अनि सम्मान गर्दा खुसीले फुरुङ्ग हुन्छ । कसैले माया गर्दा हरेक मानवलाई पनि खुसी लाग्छ अनि विभेद र घृणाले उसको पनि मन अमिलो हुन्छ । हरेकलाई बसन्त ऋतु रमाइलो लाग्छ, अनि हरेकको शरिरलाई पानीले भिजाउँछ र घामले न्यानो नै दिन्छ । आफन्तसंगको उठवसमा हरेकलाई रमाइलो अनुभूति हुन्छ अनि तिनीहरुसंग विछोडिनु पर्दा उस्तै गरी मन अमिलो भएर आउँछ । प्रकृतिले मानव जातिलाई कुनैपनि आधारमा विभेद गरेको छैन । जब प्रकृतिले भनौं वा भगवानले मानिसका बीचमा विभेद गरेको छैन भने दुइ दिनको पाहुनाका रुपमा यस धरतीमा आएका हामीले किन आफु जस्तै अर्काे मानिसलाई विभेद गर्ने , किन उँच र निचको भावनाले हेर्ने ? सर्वश्रेष्ठ अनि चेतनशिल प्राणी भनिएका हामी मानिव जातिका लागि यो सुहाउने कुरा भयो र ?
सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको अधिकारको सम्मान गर्दै जातका आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सक्दामात्र हामीले परिकल्पना गरेको सम्मुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्छ । कानुनले जातका आधारमा गरिने विभेदलाई दण्डनिय भनेको अवस्थामा फेरी उही पुरातन विचारको संवाहक बन्दै जातका आधारमा गरिने विभेदको पक्ष पोषण हुने खालका काम गर्न बन्द गरौं । ज्ञान र सभ्यताका दृष्टिले उर्वर र अग्रणी मानिने हाम्रो पूर्विय समाजका लागि त झन यो अत्यन्त अशोभनिय काम हो । त्यसैले आउनुहोस्,सबै मिली समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउन आजैबाट जातका आधारमा हुने सबैखालका विभेद अन्त्यको प्रण गरौं । विभेदरहित समाजको विकास र समृद्धि विभेद सहितको समाजको तुलनामा कयौं गुणा छिटो हुन्छ । जुन हाम्रो कामना र चाहना दुबै हो । विभेद त्याग्न सक्दा हाम्रो समाज सभ्य पनि कहलिन्छ ।
के पोशाक परिवर्तनले बढ्छ शिक्षकको मर्यादा ?
लैंगिक हिंसा, कानून र हाम्रो बुझाई
हामी कता जाँदैछौं ?
सम्बन्ध विच्छेद कानून र हाम्रो अभ्यास
गिर्दै कम्यूनिष्ट सरकारको साख
नारी सहनशीलता नारी सहनशीलता